Somalia: Farmaajo oo damaanad qaaday nolosha carruur agoon ah oo ku xareysan xarun ku taalla Afgooye - Wargane News
Home Somali News Somalia: Farmaajo oo damaanad qaaday nolosha carruur agoon ah oo ku xareysan...
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ah ee Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo ayaa ballanqaaday xanaaneeynta carruurta agoonta ee ku jira xarun ku taalla degmada Afgooye ee gobolka Shabeellaha Hoose.
Xaruunta ay hadda ku xareysanyihiin carruurtan ayaa waxaa gacanta ku haya oo maamulla ciidanka Asluubta ee dowladda Soomaaliya.
Agaasimaha Warfaafinta Madaxtooyada Cabdinuur, ayuu Madaxweynaha u soo wakiishay in uu ku wareejiyo lacag loogu talagalay inay ku ciidaan carruurta agoonta oo ahayd Ex-xarunta agoonta gabdhaha ee Kacaan, waxaana canugiiba la siiyay $110 dollar.
Dalka Soomaliya waxaa ku nool carruur badan oo ku agoomooway dagaalladii sokeeye ee ka dhacay dalka Soomaaliya sanadihii lasoo dhaafay, waxaana intooda badan ay yihiin kuwo ay ku yartahay helidda daryeel caafimaad iyo mid waxbarasho intaba.
Dhinaca kale Safaaradda Shiinaha ee Soomaaliya ayaa Talaadadii $22,000 u ballan qaaday college lagu xanaaneeyo agoonta oo ku yaaalla magaalada caasimadda ah ee Muqdisho.
Deeqdan ayaa ujeedkeedu yahay in agoonta dhigata iskuulkaas looga iibiyo cunno iyo agabka waxbarashada iyada oo ay foodda inagu soo hayso munaasabadda ciidda ee bisha barakeysan ee Ramaadaan kadib.
Safiirka Shiinaha ee Soomaaliya Ambassador Qin Jian, ayaa u sheegay wakaalladda wararka ee dalka Shiinaha ee Xinhua in caawintaasi loola jeedo in la taakuleeyo agoonta iyo carruurta kale ee qoysaska danta yar kasoo jeeda ee ku jira xaruunta Bondheere Orphanage, halkaas oo ay ku xareysanyihiin in kabadan 300 oo gabdhood.
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ah ee Soomaaliya
Mudane Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo